စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Conditions Trustly Prize Draw |
ဒီမြှင့်တင်ရေးကနေ run ပါလိမ့်မယ် 00:01 24ဇူလိုင်လကြိမ်မြောက် 2017 မှီတိုငျအောငျ 23:59 30ဇူလိုင်လကြိမ်မြောက် 2017 (BST).
ထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အမိန့်ထဲမှာ “prize draw” players must depositaminimum of £20 using Trustly as their payment method during the promotional period to gain 1 entry ticket.
Every £20 that the player deposits will warrant 1 အဆိုပါမဲနှိုက်သို့လက်မှတ်. There is no maximum amount of tickets whichaplayer can be awarded.
The “winners” of the “cash drop” will be chosen at random within3ထိုမြှင့်တင်ရေး၏အဆုံး၏အလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး
အောက်ပါအတိုင်းဆုချီးမြှင့်ခံရလိမျ့မညျ: 20x £100 cash prizes
ဒီပြိုင်ပွဲမျိုးစုံကိုကာစီနိုလောင်းကစားရုံအပေါ် Nektan ကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ပါသည်.
Prizes can take up to3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့လုပ်ဆောင်နေရက်ပတ်လုံး.
Once credited your prize remains valid for 28 နေ့ရကျ. Should you not play during these 28 days we have right to remove the funds
တာဝန်သိ Gamble. For more info visit www.gambleaware.co.uk
Tour de ပြင်သစ်ကွန်ယက်မြှင့်တင်ရေး၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ